Semalt: 6 Makomborero eWebhu Kugadzira Bhizinesi
Web scraping ndiyo nzira inotibvumira kubvisa tsvaga kubva kune mawebsite akasiyana uye nenzira yakakodzera. Izvi zvinobatsira kutanga, vatengesi, vatsigiri vezvemagariro evanhu, vatsvakurudzi vepaIndaneti, vadzidzisi, vadzidzisi, mapurogiramu, vateereri, uye vasiri mapurogiramu. Kushanda kwewebhu kunogadzirisa kupiwa kwehuwandu hwemashoko munguva pfupi.
Zvipo zvikuru zve web scraping zvinorondedzerwa pasi apa.
Pasina mubvunzo, kubvisa webhutori inzira inodhura yekuwana deta yakaoneka. Nhamba yakawanda yekuchera mapepa inowanika paInternet, kusanganisira kuiswa. io, iyo inoita kuti zvive nyore kwauri kuti ubvise zvinyorwa kubva pamapeji edikanwa anenge asina mari. Nokudaro, kunyora kunonyanya kukosha kutanga nekutanga nevadzidzi vasingadi kushandisa mari yakawedzerwa pane data extractors.
2. Kana uchinge wakasarudza dhigirii yako yakada kudarika kana chirongwa chekutsvaga web, iwe unogona kukura bhizinesi rako uye unogona kuwana mari yakawanda
. Izvi ndechokuti webhurukuro rwekugadzira maitiro uye maitiro zvinoshandiswa nyore uye zvinogona kubatanidzwa nevose web browser uye maitiro ekushanda. Vanogona kuverenga uye kubvisa kana mapeji mashomanana ebhulogi yako kana nzvimbo yose pasina chero dambudziko.
3. Kugadzirisa kwakadzama kunoda uye kukurumidza-kasi kunonzwisisika
Ndinofara, dzakawanda zvezvinyorwa zvekutsvaga deta zvakatangwa kusvika kure. Vanoda zvakaderera kana kwete zvekugadzirisa uye vanopa zvakanyatsobudiswa uye zvakanyatsorongwa. ParseHub chirongwa chakadaro hachidi kutarisirwa kwemazuva mazhinji uye chinopikira migumisiro mikuru. Webcraping services zvingatora nguva pfupi kuti ibvise deta yako uye iri nani kupfuura zvinyorwa zvekutsvaga zvinyorwa.
Kurapa kwewebhu kunogadzirisa mhinduro dzakarurama uye dzechokwadi, uye zviri nani kudarika nzira dzekunyora mabhuku. Zvimwe zvekushandisa kwekutsvaga kwewebhu zvakakurumidza uye zvakavimbika. Vanopa data inobatsira mukati memasekondi uye musasiya mhosho mumashoko enyu. Kuchengetedzwa kwakarurama kwedheta ndiyo inonyanya kukosha kwebhizimisi. Kana uri kutarisana nekutengesa mitengo kana nhamba dzemaimba, iwe unofanirwa kusarudza urongwa hwewe web scraping kana software neuchenjeri.
5. Zviri nyore kuongorora
Kune ani zvake asina ruzivo uye ane ruzivo, kugadzira zvishandiso s zviri nyore kunzwisisa uye zvinogona kushandiswa zviri nyore. Iwe haufaniri kudzidza mimwe mitauro yakafanana neC ++ kana HTML kuti ibatsirwe kubva pakushandisa software. Zvekare, data isina kukanganisa yakavimbiswa, uye zvinyorwa zvishomanana zvikanganiso zvakakurumidza kugadziriswa, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti uongorore mapeji ewebhu kuitira hutano.
6. Ponesa nguva yako
Kana iwe uri kutanga, unofanirwa kuva nezvinhu zvakawanda zvokuita. Iwe unogona kuramba wakabatikana nekutengeswa nekusimudzirwa kwebhizimisi rako uye haungagoni kuchengetedza nguva yekushandiswa kwedata rekushandisa. Uchishandisa nzira yakakodzera yekugadzira zvishandiso, unogona kuchengetedza nguva yako yese nesimba. Semuenzaniso, Connotate inoratidzika uye inonakidza yemaitiro ekutsvaga webhu husingadi chero coding uye inokwanisa kubvisa nhamba huru yemapeji ewebhu kwauri mumaminitsi makumi maviri chete. Iyi ndiyo nguva yekuchengetedza. Nekodzero yakakodzera yezvigadzirwa, unogona kuparadzira webusaiti yose. Iyo data inowanikwa mumagadzirirwo akaoneka chete Source .